Somaliland : Masuulkii 2-Aad ee Musuq u Xidhnaa oo lasii Daayay – HCTV
HCTV 0	March 25, 2019 1:03 pm
Dad Kartoon lagu Dhoofinayay oo lagu Qabtay Uganda.
Hargeysa (HCTV) – Ciidammada Booliska ayaa Xabsiga ka siidaayey Agaasimihii Maamulka iyo Lacagta ee Waasaaradda Warfaafinta Somaliland, Xasan Maxamed Maxamuud oo toddobaadkii u dambeeyay ku xidhnaa Magaalada Hargeysa.
Agaasimaha Waaxda Maamulka iyo Lacagta ee Wasaaradda Warfaafinta, dhaqanka iyo Wacyi-gelinta Somaliland, ayaa Ciidammada amnigu xidheen, ka dib markii sida la sheegay Hanti-dhowrka Qaranka oo baadhitaan ka waday Wasaaradda Warfaafintu codsaday in la xidho, isaga iyo Agaasimihii guud ee Wasaaraddaasi oo dhawaan iscasilay.
Laakiin, ilo-wareedyo xog-ogaal ah ayaa HCTV u sheegay in Isniinta Maanta lagu siidaayey Damiin.
Sidan oo kale, ayaa Damiin loogu siidaayey Agaasimihii hore ee Wasaaradda Warfaafinta Dr. Cismaan, laakiin siidaynta Agaasimaha Maamulka iyo Lacagta ee wasaaraddaasi, ayaa ku soo beegmaya xilli Xeer ilaalinta Somaliland ay hor-yaallaan dacwado ka dhan ah Wasiirka Warfaafinta Cabdiraxmaan Guri-barwaaqo iyo Wasiirka gaashaandhigga oo ku eedaysan musuqmaasuq.
Xeerka la dagaalanka Musuqmaasuqa Somaliland, ma ogola in Qof ku eedaysan musuqmaasuq damiin lagu siidaayo ama uu iibsado haddii xukun Maxkamadeed ku dhaco.